Taariikhda My Butros » Sidee taariikhda Girl A tusiya Little Jacayl
Haddii aad shukaansi gabar oo muujinaysa jacayl yar waxaa laga yaabaa in kuu soo jidan oo sheed iska tuuro. Waxaad noqon kartaa mid ka mid ah in mar walba la bilaabo xiriir jidh ahaaneed sida in ay xabadka, habsiinta, ama dhunkashada. In kasta oo ay tahay qof soo dhowaynayo qaab of jaceyl aad, ayay u muuqataa in ay raaxo la bilaabo waji ka, kuwaas oo iyada u gaar ah. Haddii aad dareento ka taariikhda iyo waxa aad dhibaa, qaado talaabo hadda si looga fogaado xiisad aan loo baahnayn in aad xiriir.
Waxaa muhiim ah in la fahmo in gabadha aad wada socotaan ma ka akhrisan kartaa oo aad maankaaga iyo waxaa laga yaabaa in wax fikrad ah kama sida dhaqankeeda uu kuu saameeyo. Khabiir Xiriirka, Dr. Karen Sherman ayaa ku nuuxnuuxsaday, in ay tahay muhiim inaad u sheegto gabadha aad wada socotaan sida aad u dareento. Waxaa laga yaabaa, dhaqankeeda unaffectionate ayaa ka tagay waxaad dareemaysaa diiday, fog iyada ka, niyad, ama xataa aan loo baahnayn. Si kasta oo ay tahay, iyada jiid qoondeeyay wadahadal dhab ah oo ka hadli sida ficilada iyada aad saamayn.
War celin weydii
Ka dib markii aad ka soo bixiyey wacyi in aad waxa ku dhibaya, waa waqti si aad gunta. Weydii su'aalo si ay u aqoonsadaan sababta asalka u ah dhaqanka saaxiibtiis ah. Waxay wax laga yaabaa in ay xiriir yeeshaan hore ee taariikhda iyada aan u baahneyn badan oo Jacayl. Intaas waxaa sii dheer, haddii xiriirkaaga uu weli waa xad cusub, ayay u baahan tahay waqti dheeraad ah oo laga yaabo inuu iskululeeyo si aad iyo dalabka xiriirka. Marka ay laba idinka mid ah farta sababo suuragal ah iyada la'aan Jacayl, gaysaan siyaabaha labadiinaba aad yeelan kartaa kulmay baahidaada.
Xusuusnow, waa in aad muujiyaan dareenkooda si ay gabadha aad wada socotaan si aad ku dabiici ah idiin yimaado, xitaa haddii uusan iyaga is dhaafsasho. In uu article "10 Astaamaha u gaarka ah Dadka aadka Jeeel", Dr. Kory Floyd taxayaa faa'iidooyinka badan ee gacalo sida isagoo isku qabaan kalsooni, cabsi yar ee Shukaansiga, iyo adkaysi weyn ka stress. Intaa waxaa dheer, cilmi-Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, iyo Robert Stahmann muujisay in jacaylka jirka kordhiyaa qanacsan xiriirka u leh labada lamaane. In kasta oo aysan jirin gabadha aad ee Jacayl, aad furfurnaanta u gaar ah si ay u muujiyaan jaceyl kuu ogolaanaya in aad si aan u weyneyno ku saabsan natiijo wacan oo ay leeyihiin xiriirka hagaagtay mustaqbalka.
Waxaa laga yaabaa in ay yimaadaan dhibic marka aad garowsato in, Inkasta oo dadaal ugu wanaagsan saaxiibtiis, weli aadan ku qanacsanayn in xiriirka. Dr. Sherman ayaa sheegtay in waxyaabaha muhiimka ah ee xidhiidhka wax lagu baranayo in uu aqbalo mid ka mid duwanaanshaha kale ee. Haddii aad dareentid in la'aanta gabadha aad ee Jacayl sii wadaan in ay ku dhibayaan, waxaa ugu fiican in si loo soo afjaro xiriirka Osman Sahardiid Cadaani iyo hesho qof ku soo bixi karaan baahida aad u Jacayl laga yaabaa in.